Samewe Iinkonzo zeMali
Gallary kweesampuli Knitting
SY52-3S uwenza unwele enye inaliti ecikizekileyo unwele kabini yenaliti erhabaxa,-high speed umva ukwandisa ngempumelelo isantya ukunitha nge-20% -30%. Omabini amacala grippers kunye neendlela ahlabayo ngempumelelo ukunciphisa vulu ukuchithwa ukuphucula imveliso. Olu luhlu lusetyenziswa iteknoloji yedijithali ukuze kuphunyezwe iipateni of transfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, okubonakala shap ...
SY52-3S uwenza unwele enye inaliti ecikizekileyo unwele kabini yenaliti erhabaxa,-high speed umva ukwandisa ngempumelelo isantya ukunitha nge-20% -30%. Omabini amacala grippers kunye neendlela ahlabayo ngempumelelo ukunciphisa vulu ukuchithwa ukuphucula imveliso. Le mixholo iya kusetyenziswa iteknoloji yedijithali ukuze kuphunyezwe iipateni of transfer, tuck, pointelle, intarsia, jacquard, kwacaca ukulungisa, ukulungisa efihliweyo kunye neminye imisebenzi ipateni ukunitha rhoqo, oko ukunitha jacquard mgaqweni multi-bala, intarsia, intambo kunye pointelle iipateni isakhiwo.
ijezi Ububanzi stroke eliguqukayo, max 52 "(132cm)
Speed ​​ukunitha UMax 1.2m / umzuzwana, 24 amanqanaba isantya adjustable, zahlelwa imiyalelo.
Density Isitishi Sehla drive motor, wasele omhle 0-365 icandelo ngalinye
Amanqwanqwa AC Servo motor drive, Max-intshi 1 uxinezeleko. 1/4, 1/2, 3/4 kwelizwi kunye nemisebenzi kulungelelana ziyafumaneka kwi nasiphi na isikhundla.
ukunitha System Uphawu olulodwa | inkqubo.
Triangle ukuThunga Idizayini zizonke. inkqubo nganye angakwenzela sisaqhubeka, tucking, yaye hayi-ukunitha ngexesha elinye, kwakunye phambi abatshintshela ngasemva, nongasemva ukuze ngaphambili okanye zombini ngaphambili nangesemva ngaphandle kwemiqathango ngqo.
Ukhetho inaliti inkqubo nganye 8 Iiseti selectors yenaliti nobunzima kakhulu, nto leyo ingafakwa okanye zisuswe nje ukusuka labagcwalisi kunye zigcinwe lula.
yenaliti Bar Le iinaliti steel kufakwa ebhedini inaliti, iinxalenye ukuba indawo xa kwaphulwa
System yokwehlisa imiyalelo lwamagosa motor drive yekhompyutha, ziyatshintsheka kumanqanaba 24.
drive System Ilawulwa ngu AC Servo Motor, ibhanti eqhutywa, 24 amanqanaba isantya selectable kunye adjustable kwinqanba ngalinye.
abathwali ntambo 2 * 8 abathwali vulu kwicala ngalinye-4 neentsimbi sikhokelo, switchable kuyo nayiphi na indawo ngaphakathi ububanzi ukunitha.
Misa motion Ngokwaphulwa ntambo, ngeqhina enkulu, ilaphu cofa-off, inaliti breakage, phezu-torque, ukuziqengqa umva, unwele isiphoso, isikhundla ezingafanelekanga of presser, vulu ngokugqithisileyo okanye ekufikeleleni kwi target kwimveliso.
Unit computer Ukuhlela mhlawumbi kwenziwa nge ukusebenza ukubonisa panel, LCD screen ukubonisa data.
memory capacity 1024 * 4096, ububanzi okanye ubude iipateni zilungiswe.
Storage data USB input
Bonisa Iilwimi Chinese and IsiNgesi. (The nezinye iilwimi ezinqwenelekayo ziyafumaneka)
Power phase-3 AC, 220V
Factor capacity 2.0kw / machine
Previous: SY52-2S kabini-System
Okulandelayo: 3D Vamp Knitting Machine
ngokwawo Knitting Machinery
Zenzekelayo Flat Knitting Machine
oluzenzekelayo Knitting Machine
iCashmere Knitting Machine
Lwekhompyutha Flat Knitting Machine
Lwekhompyutha Jacquard Flat Knitting Machine
lwekhompyutha Knitting machine
lwekhompyutha sweater Knitting Machine
lwekhompyutha ijezi Making Machine
Flat Knitting Machine Abavelisi
Ngokupheleleyo Shoe Automatic Knitting Machine
Speed ​​High Flat Knitting Machine
ingqosha neyenu ke sweater Machine
Ukunitha Shoe Upper
Ijezi Knitting Machine Price
Three System sweater Knitting Machine Price
-System ezintathu computer Flat Knitting Machine
-System ezimbini computer Flat Knitting Machine
Yoboya sweater Knitting Machine
Idilesi: No. 118 Kuphephe Tai Road, Jiao chuan Street, District Zhenhai, Ningbo City, China